द अल न्यू रेनो काइगर बुकिङ खुल्यो, मूल्य र विशेषता थाहा पाउनुहोस् - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
द अल न्यू रेनो काइगर बुकिङ खुल्यो, मूल्य र विशेषता थाहा पाउनुहोस्
२०७८ श्रावण, १ शुक्रवार
काठमाडौँ / डिस्रप्टिभ इनोभेसनको आफ्नो वचनलाई अगाडि बढाउँदै रेनो नेपालले बिहीबार द अल–न्यू काइगरको मूल्य निर्धारण नेपाली रु २८.४९ लाख (सम्पूर्ण नेपालको एक्स शोरुमहरू)मा घोषणा गरेको छ ।
उत्कृष्ट मूल्य निर्धारणको साथ, रेनो काइगरले निश्चित रूपले कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्टमा गतिशिलता परिवर्तन गर्ने निश्चित रहेको छ । रेनो काइगरको लागि बुकिंगहरू बिहीबारदेखि देशभरका १५ वटा सेल्स आउटलेटको एक्सटेन्सिभ डिलरसिप नेटवर्कहरूबाट सुरू हुँदैछ ।
रेनो इन्डिया अपरेशनका कन्ट्री सीईओ र प्रबन्ध निर्देशक भेन्कट्राम ममिलापल्लेले भने “रेनो काइगर आधुनिक एसयूभी हो जुन बजारका लागि पर्फेक्ट फिट हो । यसले हाम्रो इनोभेसन, क्रियटिभिटी, कस्टोमर अन्डरस्ट्यान्डिंग र सबै भन्दा माथि हामो ध्यानलाई गाडीहरू बनाउनमा एक बेजोड मूल्यको प्रस्ताव गर्न केन्द्रित गराउँदछ ।
रेनो काइगरमा विशिष्ट एसयूभीको लुक छ र यसको लामो व्हीलबेसले बोर्डमा ठूलो ठाउँ र मात्रा ओगट्न मद्दत पुर्याउँछ । धेरै स्मार्ट गुणहरु सहितलोड रहेको काइगरले हाम्रो एसयुभीको लिगेसीलाई सुदृढ पार्नेछ र यसको लन्चको साथ हामी रेनो परिवारमा अधिक ग्राहकहरुलाई स्वागत गर्न तत्पर छौँ । ”
विशाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निकुञ्ज अग्रवालले भने, “नेपालमा रेनो काइगर सबैभन्दा बढी मागका साथ धेरै प्रतिक्षा गरिएको गाडी हो । हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई रेनो काइगरको आगमन बारे सूचित गर्न पाँउदा निकै खुसी छौँ । हामी रेनोकाइगरको स्टनिंग डिजाइन र आधुनिक संगै स्मार्ट सुविधाहरुले आफ्ना अपेक्षाहरु पूरा गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ ।
ग्राहकहरुको विस्तृत सेटको बढ्दो एसयूभीको आकांक्षा पूरा गर्ने दृष्टिकोणको साथ हामीले रेनो काइगर आकर्षक मूल्यको रहेको कुरा सुनिश्चित गरेका छौँ र हामी यस न्यू गेम चेन्जरको साथ हाम्रो एसयूभीको लिगेसी सुदृढ पार्न लागि पार्नेछौँ । ”
रेनो काइगरले आफैलाई एक स्टनिंग, स्मार्ट र स्पोर्टी बी–एसयूभीको रुपमा स्थापित गरेको छ । स्टनिंग डिजाइन स्पोर्टी र मस्कुलर एलिमेन्टहरु द्वारा उदाहरणको रुपमा छ जसले रेनो काइगरलाई एक सही एसयुभीको रुपमा खडा गरेको छ ।
रेनो काइगरमा स्मार्ट केबिनले प्रविधि, कार्यक्षमता र रुमिनेशको संयोजन रहेको छ । उच्च प्रदर्शनको साथसाथै यसमा स्पोर्टी ड्राइभ रहेको छ जसमा मल्टि सेन्स ड्राइभ मोडहरु रहेको छ । यसले ग्राहकहरुलाई ड्राइभिंग प्राथमिकताहरूमा फ्लेग्जेबिलिटी प्रदान गर्दछ ।
रेनो काइगरलाई एमटी र एएमटीको दुईवटा विकल्पहरूमा १.० एल इनर्जीमा प्रदान गरिनेछ । ग्राहकहरूले चारवटा उपलब्ध रहेको ट्रिमहरू–आरएक्सई, आरएक्सएल, आरएक्सटी र आरएक्सजेड बाट छनोट गर्न सक्नेछन् ।
प्रत्येक संस्करण सेग्मेन्टमा ग्राहकको माग र आवश्यकताहरुलाई ध्यानमा राखी बनाइएको हो र सबै ट्रिमहरूमा यसको आकर्षक मूल्य राखिएको छ । ग्राहकहरूको हरेक स्तरमा एक मूल्यवान लाभ छ जुन स्टाइलिश डुअल टोन संयोजनको लागि विकल्पको रूपमा रहेको छ ।
रेनो काइगरको दुई अगाडिको सीट र दुई पछाडिको सिटमा तीन–पोइन्ट सिटबेल्ट लगाइएको छ भने रियर मिडल प्यासेन्जर सिटमा दुई–पोइन्ट सिटबेल्टको सुविधा रहेको छ । रेनो काइगरमा दुई साइड एयरब्याग संगै ड्राइभर र फ्रन्ट–सिट यात्रीको लागि दुई अगाडी एयर ब्यागहरूको साथ आउँदछ । दुबै अगाडि सिटहरूको सुरक्षाको लागि सीट बेल्ट रिमाइन्डर चेतावनीकोे सुविधा रहेको छ ।
एक्सेसिसरिज र पर्शनलाइजेशन फ्रन्टमा ग्राहकहरुले विशेष क्युरेट गरिएको एक्सेसरी प्याकहरुको स्मार्ट रेन्जबाट छनोट गर्न सक्दछन् जसले काइगर गाडीलाई अर्को तहमा लैजान मद्दत पुर्याउँछ । त्यहाँपाँच वटा एक्सक्लुसिभ पर्शनलाइजेशन प्याकहरू–एसयुभी, एट्राक्टिभ, एसेन्सियल, स्मार्ट, स्मार्ट प्लस रहेका छन् जुन टेक एक्सेसरिज सहित एक वायरलेस चार्जर र एयर प्युरिफायरका साथ उपलब्ध रहेको छ ।
एक्स शोरूमहरूमा इनर्जी एमटीको आरएक्सई २८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, आरएक्सएल २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, आरएक्सटीलाई ३२ हजार ९९ हजार रुपैयाँ र आरएक्सजेडलाई ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्नेछ । यसैगरी इनर्जी इजीआर एएमटीको आरएक्सएललाई ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आरएक्सटी ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र आरएक्सजेड ३७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । डुअल टोनको विकल्पहरू सबै भेरियन्टहरूमा अतिरिक्त नेपाली रु +५०,००० मा उपलब्ध हुनेछ ।
६ वटा आकर्षक रंगहरुमा उपलब्ध छन्–क्यासपियन ब्लु, रेडियन्ट रेड, मुनलाइट सल्भिर, प्लानेट ग्रे, आइस कुल वाइट, माहोगनी ब्राउन साथै डीटी सहितको विकल्पहरु छन्।
रेनोकाइगरः स्टनिंग डिजाइन
यसको छुट्टै एथलेटिक डिजाइन जुन इनर्जीसँग बस्र्ट भइरहेको हुन्छ । जस्तोसुकै बाटोमा पनि काइगर एसयुभीले अर्बन मोडर्निटीलाई एजिलिटीसँग जोड्दछ ।
यसको मस्कुलर बडीवर्कले स्टर्डीनेस र डाइन्यामिजमलाई हटाउँदछ । काइगर अर्बन जङ्गल एक्सपेरियन्स र नयाँ प्रकारको सवारीको लागि एक रियल इन्भिटेसन हो ।
स्टर्डी अन द रोड
काइगर गाडीको डिजाइन काइगर शो–कार द्वारा प्रेरित गरिएको थियो जुन २०२० सालको अन्त्यमा लन्च गरिएको थियो । स्कल्प्टेड बोनेटले गाडीको पर्शन्यालिटीलाई इम्प्रेसिभ बम्परका साथ बढाउँछ ।
विंग्सहरूले आफ्नो प्रनाउन्स्ड सोल्डर लाइन्सका साथ डिजाइनलाई बढाँवा प्रदान गर्दछ र कालो सिल्स र ह्विल आर्चहरूले थप सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ । हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स(२०५ मिलिमिटर) र फंशनल रुफ बारहरुले गाडीको सिल्हूट बढाउँछन् र यसको बोल्ड एसयुभी लुकलाई अझै आकर्षक बनाउँछ ।
एड्भेन्चरका लागि बनेका पांग्राहरू
उच्च ट्रिमका तहहरुमा काइगरको ४०.६४ सेन्टिमिटरको एलोइ पांग्रामा स्पोर्टी र स्टाइलिश लुकको लागि ब्ल्याक डायमन्ड–कट फिनिस रहेको छ । प्रोटेक्टिभ ह्विल आर्च क्लाडिंगले बडीवर्कको लुकलाई बोल्ड र स्टर्डियर बनाउँदछ ।
२५०० मिलिमिटरको लामो ह्विलबेसमा गाडीको चार कुनामा पांग्राहरु रहेका छन् जसले कुनै पनि सडकमा गाडी चलाउँदा स्थिरता बढाउँछ र कार भित्रको ठाउँलाई अप्टिमाइज गर्दछ । यसले गर्दा प्रत्येक यात्रीहरुलाई इष्टतम सुविधा प्रदान हुन्छ र यसले ४०५ लिटरको बुट भोल्युम प्रदान गर्दछ ।
कडा र चुस्त, एथलेटिक कर्भ
काइगरको शीर्ष भागले स्लिक र टाउट लाइनहरुको साथ गतिशील सिल्हूटलाई बढाउँदछ जुनअधिक मस्कुलर र सलिड लोवर पार्टको विपरित हो । स्लेन्डर विन्डस्क्रिन एक फ्लोटिंग रुफमा एक्स्टेन्ड हुन्छ जुनतल पट्टि ढल्किरहेको पछाडिको झ्यालमा जान्छ ।
यसले गाडीलाई कुप–स्टाइलको एसयुभी लुक प्रदान गर्दछ । रुफड्रपमा चित्रित कट–आउटको साथ एरो डाइन्यामिक स्पोइलरको गाडीलाई एकदम डिस्टिंग्टिभ लुक दिनशार्क फिन एन्टेना माथि राखिएर डिजाइन गरिएको छ ।
स्पोर्टी डिजाइन एक्सप्रेशन
रेनोका डिजाइनरहरुले काइगरलाई धेरै सुविधाहरु सहित सुसज्जित गरेका छन् जसले गाडीलाई स्पोर्टी लुक दिन मद्दत गरेको छ ।
फ्रन्ट ग्रीलको थ्री ढी ग्राफिक फिनिसले हनीकम्ब–आकारको व्रmोम्ड इफेक्टको साथ एक पर्फेक्ट उदाहरण हो । एलुमिनियम फिनिस स्किड प्लेटले रियर बम्परलाई अझै राम्रो बनाउँछ ।
बुट ढोकाको स्लोपिंग र स्पोर्टी रियर विन्डो, इन्टिग्रेटेड स्पोइलरले काइगरका एरो डाइन्यामिक सिल्हूटलाई अझै राम्ररी दर्शाउँछ ।
मोडर्न र स्ट्राइकिंग फ्रन्ट एन्ड
माथिल्लो पट्टीे फ्रन्ट ग्रीलले बनेको र एलईडी डेटाइम रनिंग लाइटको बत्तीदुवै छेउमा राखिएकाले यसले गाडीलाई एक उन्नत रुप प्रदान गर्दछ । अत्यधिक रेकग्नाइजेबल योग्य तल्लो भागले बम्परलाई दुई क्षेत्रहरुमा विभाजन गर्दछ जसको प्रत्येक ठूलो कुनामा तीनवटा एलईडी हेडलाइटहरु छुट्याइएको पियोर भिजन र क्रोम रिफ्लेक्टरको साथ अक्टागोनल युनिटमा छुट्टिन पुग्दछ । यसले कोहेरेन्ट र ओभर ल्यापिंग स्प्लिट डिजाइन बडीवर्कसँग कन्ट्रास्ट गर्दछ र मोडर्निटी र सोफिस्टिकेसनको साथ एक स्टं«ग आइडेन्टिटीको पहिचान प्रदान गर्दछ ।
रियर लाइटिंग सिग्नेचर
अल–न्यू एलईडी टेललाइटले गाडीको पछाडिको भागलाई उज्यालो पार्दछ । चमकदार कालो इन्सर्टहरु सहित टेल ल्याम्प युनिटहरुले दृश्यमा आधुनिकता र सेग्मेन्ट भित्रमा विशिष्टता प्रदान गर्दछ जसले काइगरको रियर डबल सी–आकारको लाइटनिंग सिग्नेचरलाई दर्शाउँछ । यिनीहरु बडीवर्कको प्रत्येक छेउमा चित्रित हुन्छन् र विंग्सहरुसम्म विस्तार हुन्छन् जसले काइगरलाई डिस्टिंग्ट युनिक पर्शन्यालिटी प्रदान गर्दछ ।
टु–टोन बडी कलर
काइगर ६ वटा एक्साइटिंग बडी रंगहरुमा उपलब्ध छन्ः आइस कुल वाइट, प्लानेट ग्रे, मुनलाइट ग्रे, माहोगनीब्राउन, क्यासपियन ब्लु,रेडियन्ट रेड साथ मिस्टरी ब्ल्याक रुफ। सबै ट्रिमका स्तरहरुमा दुई टोन विकल्पहरु समावेश छन् ।
एकल वा डुअल टोन रङ्गको विकल्पहरूको विस्तृत श्रृङ्खलाबाट छनोट गर्न ग्राहकहरुलाई अवसर प्रदान गर्दै रेडियन्ट रेडले एक बाह्य र दुई टोन रंग योजना अन्तर्गत एक शीर्ष संस्करणको रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
रेनोकाइगरः स्मार्ट केबिन
कम्प्याक्ट तर आश्चर्यजनक स्पेस भेहिकल
काइगरको इन्टेरियरलाई स्मार्ट केबिन भनिन्छ किनकि यसले टेक्नोलोजी, कार्यक्षमता र रुमिनेसलाई संयोजन गर्दछ । काइगर केबल ४ मिटरको लामो गाडी हो जुन एसयुभीको कोटीमा पर्दछ ।
यसमा सिएमएफए+प्ल्याटफर्म डिएनए रहेको छ जसले ट्राइबरको जस्तै आफ्नो सेग्मेन्टमा रुमिनेस, केबिन स्टोरेज र कार्गो स्पेस प्रदान गर्दछ । भित्री परिष्कार र टेक्नोलोजीमा केन्द्रित एक एसयुभीको स्टर्डिनेस पूर्ण रुपमा संयोजन गर्न डिजाइन गरिएको हो ।
एक उच्च सेन्टर कन्सोलको साथ २०.३२ सेन्टिमिटरको फ्लोटिंग डिस्प्ले लिंक र वायरलेस स्मार्ट फोन रेप्लिकेसन प्रदान गर्दै काइगरको इन्टेरियरहरु विशेष साझेदारी र सुविधालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो ।
लाइट र शेडका साथ चिजेल्ड कर्भहरुले फ्लोटिंग ककपिटको इम्प्रेसन दिन्छ जुन पियानो स्टाइल कन्ट्रोल डायलहरूद्वारा एक्सेन्चुएटेड, सस्पेन्डेड एयर कन्डिसनिंग कन्ट्रोल र पेडेस्टलबाट सुसज्जित रहेको छ । यो सेन्टर कन्सोलबाट सबैका लागि सहज छन् ।
कन्सोलले २०.३२ सेन्टिमिटरको फ्लोटिंग टच स्क्रिनलाई फिचर गर्दछ जसले प्यासेन्जर कम्पार्टमेन्टलाई मोर्डन लुक प्रदान गर्दछ । यसमा १७.७८ सेन्टिमिटरको मल्टी स्किन रिकन्फिगुरेबल टीएफटी कलर क्लस्टर पनि रहेको छ ।
अनप्रेसिडेन्टेड कम्फर्ट र रुमिनेस
काइगरले तपाईँलाई महसुस गर्न सक्ने रुमिनेश अनबोर्डको साथ प्रदान गर्दछ । अगाडिमा काइगरले सिटहरूको बिचमा बेस्ट इन सेग्मेन्ट ७१०–मिलिमिटरको कपल डिस्टान्स रहेको छ ।
यसको पछाडि काइगरमा बेस्ट इन सेग्मेन्ट रहेको सेकेन्ड रो लेगरुम(२२२ मिलिमिटर) र एल्बो रूम (१४३१ मिलिमिटर) रहेको छ । सिट हाइटले कमान्डिंग ड्राइभिंग पोजिसन ड्राइभिंग कम्फर्टका साथ प्रदान गर्दछ ।
अप्टिमम बुट क्यापासिटी
काइगरले आफ्नो सेग्मेन्टको लोड क्यापासिटीमा बेस्ट बुट क्यापासिटी प्रदान गर्दै एक उच्च स्तर सेट गरेको छ (४०५ लिटर जुन सेकन्ड रो फोल्डेडमा ८७९ लिटर सम्म एक्स्टेन्ड हुन्छ) ।
अप्टिमाइज्ड स्टोरेज स्पेस
काइगरले यात्रुहरुलाई क्लेभर स्टोरेज कम्पार्टमेन्टहरुको सम्पूर्ण होस्ट प्रदान गर्दछ जसमा जम्मा २९ लिटर क्षमताको साथ चार १ लिटरको पानीको बोटल होल्डर र २ कप होल्डरहरू रहेका छन् ।
सेन्ट्रल आर्मरेस्टमा ७.५ लिटरको स्टोरेज स्पेस रहेको छ भने ग्लोभ कम्पार्टमेन्टमा १४.९ लिटरको भोल्युम स्पेस रहेको छ । यस्तै स्मार्ट सल्युसनहरुले यात्रुको आवश्यकताको साथ दिमागमा बहु स्तर पहुँचको अनुमति प्रदान गर्दछ ।
स्मार्ट र प्राक्टिकल प्यासेन्जर कम्पार्टमेन्ट
काइगरको स्मार्ट ककपिट स्टाइलबाट डिट्राक्ट नगरी प्राक्टिकल अनबोर्डको एक्सपेरियन्स दिन डिजाइन गरिएको थियो । यसको नयाँ टेक्नोलोजीले हरेक दिन सवारी चलाउन सजिलो र रमाइलो बनाउँछ ।
मोर्डन र स्मार्ट सेन्ट्रल कन्सोल
काइगरको हाई, वाइड सेन्टर कन्सोलमा ठूलो २०.३२ सेन्टिमिटरको फ्लोटिंगटच स्क्रिन केन्द्रित रहेको छ जसले एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड ओटोको लागि उच्च ट्रिममा वायरलेस स्मार्ट फोन रेप्लिकेसन प्रस्तुत गर्दछ। वायरलेस स्मार्ट फोन रेप्लिेकेसनले यात्रीहरूलाई आफ्नो स्मार्टफोनहरू कुनै चीज बिना जोड्न र विशेष ड्राइभिंग गरिरहेको बेलामा मल्टि मिडिया एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ ।
यात्रीहरूले एप्लिकेसन र सुविधाहरूमा द्रुत पहुँचका लागि पाँच स्थायी सर्टकटहरू चयन गर्न सक्दछन्। प्रणालीले एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड ओटो मार्फत आवाज मान्यता मात्र प्रदान गर्दछ साथै ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पाँच उपकरणहरू सँग जोड्न सकिन्छ र छिटो चार्जको लागि यूएसबी सकेट र बिल्ट इन भिडियो प्लेयर रहेको छ ।
मल्टी सेन्सको ड्राइभिंग एक्सपेरियन्स र एम्बियन्स लाइटनिंग
उच्च ट्रिम स्तरहरूमा, ड्राइभरले बहु ड्राइभ मोडहरू चयन गर्न मल्टी सेन्स सेटिंग्समा पहुँच रहेको छ । इन्जिन म्यापिंग, गियर परिवर्तन (अटोमेटिक ट्रान्समिसनको लागि), रेस्पन्सिभ स्टिरिंग कलमर डिजिटल स्पीडोमीटर ड्राइभ मोड परिवर्तन गर्दा अप्टिमम ड्राइभिंग एक्सपेरियन्सका लागि रिसेट हुन्छ ।
मल्टी स्किन १७.७८ सेन्टिमिटरको रिकन्फिगुरेबल योग्य टीएफटी क्लस्टरले यसको रंग र विजेट कन्फिगुरेसनलाई परिवर्तन मोडको अनुसार चयनित ड्राइभिङ् मोडसँग सान्दर्भिक उपयोगी जानकारी प्रदर्शित गर्दै परिवर्तन गर्दछ ।
नर्मल मोडः सिटी ड्राइभिङ् कन्डिसनहरूको लागि इन्जिन अप्टिमेटिम ड्राइभिंग प्यारामिटर प्रदान गर्दछ । यसले वास्तविक जानकारी र औसत ईन्धन खपत जस्ता उपयोगी जानकारी सबै निलो रंगको लुकमा प्रदान गर्दछ ।
इको मोडः इकोनोमिक ड्राइभिंग प्राक्टिसेज तिर मोडिदै यसले ड्राइभ प्रदानगर्दछ । टीएफटीको समग्र उपस्थितिलाई हरियो रंगमा परिवर्तन गर्दै, इन्डिकेटरहरू, एनिमेटेड लिफ जस्तो इकोनोमिक ड्राइभिंगमा म्याक्सिमाइज गर्नयसले रियल टाइम फिडब्याक प्रदान गर्दछ ।
स्पोट्र्स मोडः रमाईलो र खेलकुदले भरिपूर्ण रहेको क्रिस्पर ईन्जिनरेस्पन्स र फास्टर सिफ्टिंयको साथयसले एक ड्राईभिंग वातावरण प्रदान गर्दछ छ । समग्र टीएफटी स्क्रिन एपियरेन्स एसिलिरेसन गज, टर्कÞ ÷ पावर रेसियो आदि को द्रुत जानकारीको साथ यसले ड्राइभरहरूलाई सबै रमाईलो प्रदान गर्दछ!
प्रिमियम साउन्ड सिस्टम
काइगरमा एकदम नयाँ, राम्रो सँग ट्युन गरिएको क्वालिटी साउन्ड सिस्टम सुज्जित रहेको छ ।अर्कामीजद्वारा अडिटोरियम थ्रीडी साउन्ड सिस्टम जुन प्रविधि यात्री कम्पार्टमेन्टको सामग्री र आकार अनुरूप थ्रीडी साउन्ड टेलर गर्न निर्मित रहेको छ ।
सबैमा, त्यहाँ आठ अनबोर्ड स्पिकरहरू छन् (चार बुमरहरू, चार ट्वीटरहरू)। प्रणालीले स्वचालित रूपमा उच्च ट्रिम स्तरहरूमा सवारीको गति अनुसार आवाजलाई समायोजित गर्दछ ।
यो सिस्टमलाई माग अनुरुप बेस्ट साउन्ड क्वालिटी प्रदान गर्न एक्टिभेट र एड्जस्ट गर्न सकिन्छ ।
ह्यान्स फ्रि स्मार्ट एक्सेस कार्ड
दैनिक सुविधाका लागि आधुनिक ह्यान्ड्स–फ्रि कार्डको साथ, ढोका खोल्न र स्वचालित रूपमा बन्द गर्न सकिन्छ, र ईन्जिन चाबी बिना सुरु गर्न सकिन्छ ।
कार्डमा रहेका सेन्सरहरूले ड्राइभरहरूलाई ढोकामा ताल्चा लगाउने र खोल्नको लागि अनुमति प्रदान गर्दछ जसका लागि कार्डलाई उनीहरूको गोजीबाट बाहिर निकालेको वा बटन थिचेको हुनु पर्दछ ।
उनीहरूले कार्ड सम्मिलित नगरीकन गाडी पनि सुरू गर्न सक्दछन् । ह्यान्ड्स–फ्रि प्रणालीले ढोका अटो–लक फंशनको पनि ड्राइभरहरू सवारीबाट टाढा जान लाग्दा खेरिका लागि समावेश गर्दछ । यो सुविधा एक वास्तविक समय बचाउन र अविश्वसनीय सुविधा जनक योग्य छ।
काइगरले रडार सेन्सरहरू र गाइडिंग लाइनहरूको साथ रिभर्स क्यामेरा प्रदान गरि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रविधि प्रयोग गर्दछ । ड्राइभरहरुले पार्किंगको लागि रिभर्स गर्दा वा म्यान्युभरिंग गर्दा अधिक दृश्यतार सटीकताको आनन्दलिन सक्दछन् । टर्निंग रेडियस ५.०२ मिटरको रहेको छ ।
अतिरिक्त सबै नयाँ अनन्य सुविधाहरूः
काइगरले विभिन्न प्रकारका विशिष्ट सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जसमा अटोमेटिक एयर कन्डिसनिंगरहेको छ जसलाई एयर कन्डिसनिंग कन्ट्रोल मार्फत म्यानुअली एड्जस्ट गर्न सकिन्छ ।
अर्को ट्रिम स्तरमा उपलब्ध नयाँ सुविधा भनेको यात्री कम्पार्टमन्टमा वाइट एम्बियन्ट लाइटनिंग हो । यसले सेन्सर कन्सोलको अगाडि र ढोकाको पछाडि ग्रिप ह्यान्डलहरूको अगाडि स्टोरेज कम्पार्टमेन्टलाई उज्यालो बनाउँछ ।
ककपिटले ब्याक लिट स्टीयरिंग व्हील कन्ट्रोलहरू प्रदान गर्दछ। यी सँग सेटिंग्सको एक पूरा होस्टको रूपमा जस्तै अनबोर्ड कम्प्युटर मेनू, स्पिकर भोल्यूम, फोन र रेडियो सुविधाहरु र आवाज मान्यता को लागी पहुँच रहेको छ ।
काइगरले पहिलो भागमा पिएम २.५ कोक्लीन एयर फिल्टरलाई पनि प्रस्तुत गर्दछ । यसको एड्भान्स्ड एट्मोस्फेरिक फिल्टर भेन्टिलेसन प्रणालीमा फिट भएमा गाडी भित्रको राम्रो गुणस्तरता सुनिश्चित हुन्छ ।
रेनोकाइगरः स्पोर्टी ड्राइभ
रेनो–निसान एलियन्सद्वारा डिजाइन गरिएको मोड्युलर प्ल्ल्याटफर्म र पहिले नै ट्राइबरमा चित्रित गरिएको डिजाइनले पर्फमेन्श र इफिसियन्सी बिच सही सन्तुलन प्रदान गर्दछ ।
लाभपूर्ण रहेको प्ल्याटफर्महरू
काइगरले ट्राइबरको रूपमा उस्तै मोड्युलर प्ल्याटफर्म साझा गर्दछ । यसको मतलव यसले बजारमा मूख्य फाइदाहरू प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
रुमियर प्यासेन्जर कम्पार्टमेन्ट
इन्जिन कम्पार्टमेन्ट साइजको अप्टिमाइजेसन
बेस्ट इन सेग्मेन्ट केबिन स्टोरेज स्पेस
बेस्ट इन सेग्मेन्ट कार्गो स्पेस
बेस्ट इन सेग्मेन्ट रियर यल्बो विथ–तीन वटा प्यासेन्जरहरुलाई सजिलै एकोमोडेट गर्ने
बेस्ट इन सेग्मेन्ट टर्निंग रेडियस
बेस्ट इन सेग्मेन्ट रियर सिटबाट ड्यासबोर्ड भिजिबिलिटी
कम्फर्ट रड्राइभिंगको आनन्द
बेस्ट इन सेग्मेन्ट फ्युल इफिसियन्सी
हाइअर ग्राउन्ड क्लियरेन्स
काइगरको प्ल्याटफर्म र न्यू इन्जिन ग्यारेन्टी रेस्पन्सले सबै भन्दा राम्रो सम्भव ड्राइभिंग एक्सपेरियन्सको लागि भर्सटिलिटी प्रदान गर्दछ ।
इन्जिन र ड्राइभिंगको आनन्द
काइगरले १.० लिटरको स्वभाविक रूपले आकांक्षित इन्जिन प्रदान गर्दछ जसले पिएस पावर र ९६ न्यूटन मिटरको टर्क प्रदान गर्दछ ।
यो पाँच–स्पिड म्यानुअल वा इजी–आर पाँच–स्पिड रोबोटाइज्ड गियरबक्स एएमटीको साथ छ जसले किफायती मूल्य निर्धारणमा क्लचलेस ड्राइभिङ्को सुविधा प्रदान गर्दछ ।
यसले म्यानुअल मोडको फिचर गर्दछ जसले ड्राइभरहरूलाई फूल्ली अटोमेटिक वा सेक्वेन्सियल मोडमा ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ ।
यसले एफिसियन्ट इन्जिन स्टाटिंग, सेफ कार ओभरटेकिंग म्यान्युभर र आरामदायी ड्राइभिङको पलहरूलाई यसको उत्कृष्ट पावर–टु–वेट रेसियो र कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्टमा रहेको बेस्ट इन सेग्मेन्ट टर्क–टु–वेट रेसियोका साथ सुनिश्चित गर्दछ ।
अनबोर्डमा दुई फ्रन्ट सिट र दुई रियर सिट तीन–पोइन्ट सिटबेल्टका साथ सुसज्जित रहेका छन् भने रियर मिडल प्यासेन्जर सिटमा दुई–पोइन्ट सिटबेल्टको सुविधा रहेको छ ।
ड्राइभर र फ्रन्ट–सिट यात्रीहरुको लागिदुई फ्रन्ट एयर ब्यागहरुका साथसाथै सेफ्टी सुट र दुई साइड एयरब्यागको सुविधा रहको छ ।
दुवै फ्रन्ट सिटहरूमा इन्ह््यान्स्ड सेफ्टीका लागि सिट बेल्ट रिमाइन्डर एलर्टको सुविधा पनि रहेको छ ।
# रेनो काइगर
अल न्यू हुन्डाई आई २० नेपाली बजारमा, मूल्य कति तोकियो ?
KTM/ Husqvarna को नयाँ शोरूम ठिमी, भक्तपुरमा
अर्थसचिव मरासिनीको टिप्पणी : विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भए यता निर्यात घट्यो